भुवनलाई फेरी आयो अर्को आरोप ! स्वेताले पनि ‘स्कृन सट’ सार्वजनिक गर्दै खोलिन् पोल !! (भिडियो हेर्नुस्) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/भुवनलाई फेरी आयो अर्को आरोप ! स्वेताले पनि ‘स्कृन सट’ सार्वजनिक गर्दै खोलिन् पोल !! (भिडियो हेर्नुस्)
फिल्म निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीलाई फेरी अर्की महिलाले पनि दु’ब्र्य’वहार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकी छन् । उनले भुवन केसीले आफुलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत दु’ब्र्यव’हार गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनी स्वेता रेग्मी हुन् । स्वेताले भुवनले आफुलाई पनि सामाजिक सञ्जाल फेसवुक च्याटमा कुरा गर्दै अपशब्द बोलेको बताएकी छन् ।
उनले साम्राज्ञी त्यतीबेला निकै सानो उमेरको भएका कारण र कसैले पनि सहयोग नगरेका कारण उनले सार्वजनिक गर्न नसकेको हुन सक्ने बताएकी छन् ।
उनले भुवनले आफुलाई लेखेको म्यासेजको स्कृन सट सार्वजनिक गर्दै आफुलाई फिल्ममा अफर गरेको बताएकी छन् । आफ्नो १३ र ८ वर्षको छोरा छोरी भएको र तस्बिर हेरेर आफुलाई निकै सुन्दर भन्दै फिल्मको अफर गरेको उनको भनाई छ ।
जिता बरालले ट्रमा सेन्टरमा हङ्गामा गरेपछि..! भिडियो डिलिट गर्न ज्ञानेन्द्रको धम्की बोलिन् तारा बराल (हेर्नुहोस भिडियो)
कोरोना त्रासको प्रचार बढी भयो, अब जनतालाई घर भित्र थुन्ने कम बन्द गरेर जनजीवनलई सामान्य बनाउँ : डा. शाही